२५ गते साँझ ७ बजे दीप प्रज्वलन गर्न सरकारको आह्वा`न – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /News/२५ गते साँझ ७ बजे दीप प्रज्वलन गर्न सरकारको आह्वा`न
२३ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले वैशाख २५ गते साँझ ७ बजे दीप प्रज्वलन गर्न आह्वा`न गरेको छ । मंगलबार बसेको कोरोना रोक`थाम तथा निय`न्त्रण उच्च स्तरीय समितिको बैठकले कोरोना रोक`थाम र उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीको सम्मानमा दीप प्रज्वलन गर्न आह्वान गरेको हो ।
२५ गते वुद्धजयन्ती पनि परेको छ । त्यस दिन लुम्बिनीमा नेपालले अन्तर्रा`ष्ट्रिय वौ`द्ध सम्मेलन पनि आयोजना गरेको थियो । तर कोरोना भाइरसको म`हामा`रीका कारण स्थ`गित भएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस::: काठमाण्डौ जाँदै हुनुहुन्छ ? होस् गर्नुहोला पर्नुहोला ठुलो सम`स्यामा !
सवारी पास बनाइ`हालेँ, अब ढुक्क सँग उपत्यका जान्छु भनेर तपाईंले धारणा बनाउनु भएको छ ? या त अब सवारी पास बनाइएर उपत्यका जान्छु भन्ने सोच छ । याद गर्नुहोस् ! पास बनाउँदैमा अब उपत्यका छिर्न पाउनुहुन्न । नागढुङ्गा, फरपिङ, मुड्खु, जगाती, जरसिङपौवा या अर्काे कुनै नाकाबाटै फर्कनु पर्ने पनि हुनसक्छ । दुःख मात्रै पाउन सक्ने भएकाले बेलैमा ध्यान पु¥याउनुहोला ?
दैनिक उपभोग्य सामग्री र स्वास्थ्य उपचारसम्बन्धी जोडिएका सवारीबाहेक अब उपत्यकामा ‘नो इन्ट्री’ गरिएको छ । यसअघि पास बनाएपछि निर्वाधरुपमा सवारी भित्रने गरेको थियो । अब भने पास बाहक गाडीलाई समेत धमाधम फर्काउन थालिएको छ । महा-नगरीय प्रहरी कार्यालय रानी पोखरीका प्रमुख प्रहरी नायब महा`निरी`क्षक विश्व`राज पोखरेलले पास भएकालाई पनि अब अत्यावश्यक बाहेक प्रवेश रोकिएको बताउनुभयो । “दैनिक उपभोग्य सामग्रीसँग र स्वास्थ्य उपचारसँग जोडिएका सवारी आउन पाउँछन्, त्यसबाहेक पास लिएर आए पनि सवारी भित्रिन पूर्ण निशेष छ ।”
विभिन्न नाकाबाट अहिले उपत्यका एक हजार ५०० हारा`हा`रीमा सवारी भित्रिने गरेका छन् । त्यसमा झण्डै ४०० सवारी पास बोकेर विभिन्न काममा आउने गरेको प्रहरीको अभिलेख छ । दैनिक उपभोग्य सामग्री ल्याउने सवारी समेत बढेको छ । ती गाडीमा चालक सहचालक गरी दुईदेखि तीनजना आउने गरेका छन् । त्यसरी हेर्दा झण्डै चार हजार हाराहारीमा मानिस दैनिक उपत्यका भित्रिने गरेका छन् । अत्याव`श्यक सावारीमा आएकाहरु सामान अनलोड गरेर बाहिरिने भए पनि अन्य व्यक्तिहरु बाहिरिने गर्दैनन् । त्यसैले पनि कडाइ गरिएको हो ।